कोरना र लकडाउनले खस्केको पर्यटन उकास्न …. – Tourism News Portal of Nepal
कोरना र लकडाउनले खस्केको पर्यटन उकास्न ….
काठमाडौं–काठमाडौं–कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारले लकडाउन लागू गरेको आज ४० औं दिन हो । यस अवधिसम्म नेपालमा सबै कोरोबार ठप्प भएका छन् । ठूला व्यवसायिक घरानादेखि साना मजदुरसम्मलाई यसले नराम्ररी थला पारेको छ ।
लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन्, भने व्यवसायीक संस्थाहरु पनि धरासायी हुने स्थितिमा पुगेका छन् । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने सिजन हो यो नेपाली किसानका लागि । किसानले पनि ढुक्कसँग खेती लगाउन पाएका छैनन् ।
यस्तै, किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमै कुहिन थालेको छ । विपन्न बस्तीमा भोकमरी नै लागेको छ । लामो समयदेखि काममा जान नपाउँदा ज्यालादारी मजदुरको परिवारमा बिहान के खाउँ र साँझ के खाउँ भन्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
उत्पादनका माध्यम सबै ठप्प छन् । सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याए पनि सबैको पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन । त्यसैमाथि केही नेता र कर्मचारी भने यही बिपत्तिमा कसरी कमाउने भन्ने ध्याउन्नमा उद्धत देखिन्छन् ।
यो कलडाउनले नेपालको सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको क्षेत्र भनेको पर्यटन नै हो । नेपाली पर्यटनका लागि मुख्य सिजन हो यो । हिमाल आरोहणदेखि विभिन्न पदमार्गीका लागि घुम्ने मुख्य सिजन हो । तर, चार महिनायता पर्यटकीय क्षेत्र पनि सुनसान बनेका छन् । त्यस कारण यस क्षेत्रसँग जोडिएका व्यवसायी कामविहीन बनेका छन् भने, मजदुर पनि रोजगारी गुमाउँदै हात थापेर बस्नुपरेको छ ।
अहिले खस्केको पर्यटन माथि उकास्न त्यति सजिलो पनि छैन । यो महामारीले पूरै विश्वलाई नै आतंकित बनाएकाले सबै आर्थिक कारोबारमा प्रभाव परेको हो । केहीगरी छिट्टै कोरोना नियन्त्रण भइहाले पनि नेपालको पर्यटन व्यवसाय माथि उस्किन सक्ने अवस्था छैन ।
अब पुरानै तरिकाले काम गर्दा पनि सामान्य अवस्थामा फर्किन एक दशक नै लाग्ने देखिन्छ । त्यसैले लकडाउनपछि नेपाली पर्यटन क्षेत्रलाई नयाँ मार्ग दिन उपयुक्त हुन्छ । पर्यटन व्यवसायलाई कसरी जोगाइराख्ने र यसलाई छिट्टै सामान्य अवस्थामा ल्याउन के गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न बहस चलिरहेका छन् ।
हामीले पनि केही सातादेखि अब लकडाउनपछि नेपाली पर्यटनको भविष्य के हुने त भन्ने विषयमा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल र कस्ता योजना उपयुक्त हुन्छन् भनेर विकल्प खोज्ने काम गरेका छौं ।
अहिले धेरैले अबको बाटो ग्रामीण पर्यटन नै हुने बताउँदै आएका छन् । कम लगानी र प्रभाव छिट्टै पर्ने भएकाले केही समयका लागि ग्रामीण पर्यटनलाई फोकस गर्नुपर्ने कुराहरु आइरहेका छन् ।
पर्यटन माथि उकास्ने बहस अन्तर्गत आज हामीले ग्रामीण पर्यटनका विषयलाई केन्द्रित गरेका छौं । आजको शृंखलामा हामीले अबको विकल्प ग्रामीण पर्यटन कसरी हुनसक्छ त भन्ने विषयमा गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च नेपाल (भिटोफ नेपाल) का अध्यक्ष ध्रुव सिंखडासँग कुराकानी गरेका छौं ।
अबको विकल्प ग्रामीण पर्यटन
साँझ परेपछि चरा गुँडमै फर्किन्छ भनेझै धेरै समयको अन्तरालपछि अहिले ग्रामीण पर्यटनका विषयमा बहस भइरहेको छ । यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा पनि हो । आपत्मै भए पनि ग्रामीण क्षेत्रलाई सम्झिएको छ ।
अहिले शहर केन्द्रित पर्यटनको सम्भावना छैन । पहिले हामी आफूले बानीमा सुधार गरेमात्रै अरुलाई रिझाउन सकिन्छ भन्ने कुरा ढिलै भए पनि सबैले बुझेको देखिन्छ । अब सरकारले रणनीति पनि ग्रामीण पर्यटन केन्द्रित हुनुपर्छ ।
लकडाउन अन्त्य भए पनि केही समयसम्म हामीले बाह्य पर्यटकको अपेक्षा गर्ने कुरा हुँदैन । किनकी यो महामारी हामीलाई मात्र परेको छैन । सारा विश्वले नै झेलिरहेको छ । त्यसैले युरोप अमेरिकाका पर्यटक आउनलाई पहिले उनीहरुको अािर्थक स्थिति पनि बलियो हुन आवश्यक छ । त्यसैले कम्तिमा पनि दुई वर्षसम्म बाह्य पर्यटकको आवागनको सम्भावना देखिँदैन । केही अपवादमा बाहेक ।
यस्तो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र र पर्यटनलाई चलायमान राख्नका लागि ग्रामीण पर्यटन नै उपयुक्त विकल्प हो । यसका लागि वर्षौंदेखि हामीले सरकारसँग विशेष प्याकेजसहितको रणनीति ल्याउन माग गरिरहेका छौं ।
अहिले सरकारले पनि यसको महत्व बुझेको देखिन्छ । अन्यजस्तो ग्रामीण पर्यटनमा धेरै लगानी गर्नु पनि पर्दैन । हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा भएका मौलिक उत्पादन, ऐतिहासिक धरोहर र मोलिक संस्कृति देखाएर व्यवसाय गर्ने हो ।
” लकडाउन अन्त्य भए पनि केही समयसम्म हामीले बाह्य पर्यटकको अपेक्षा गर्ने कुरा हुँदैन । किनकी यो महामारी हामीलाई मात्र परेको छैन । सारा विश्वले नै झेलिरहेको छ ।
त्यसैले कम्तिमा पनि दुई वर्षसम्म बाह्य पर्यटकको आवागनको सम्भावना देखिँदैन ।”
स्थानीयको आम्दानीसँग जोड्नुपर्छ
केही क्षेत्र विशेष पर्यटनमा त्यहाँका हालीमुहाली गर्ने व्यवसायीले मात्रै यसबाट फाइदा लिन्छन् । साँच्चिकै हामीले जनताको आर्थिक समृद्धिसँग पनि पर्यटनलाई जोड्न खोजेका हौं भने, ग्रामीण पर्यटन नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो ।
तर, गाउँमा हुने गतिविधिले स्थानीयको आम्दानीसँग जोडिन्छ । धेरैथोर भए पनि स्थानीयको आम्दानीले बजार पाउँछ । गाउँमा चहलपहल बढ्दा विकास निर्माणका कामहरु पनि केन्द्रित हुन्छन् । यस विषयमा योजना ल्याउन सरकारलाई पहिल्यैदेखि हामीले भन्दै आएका थियौं ।
अहिले विभिन्न सचेतना र विकासका नाउमा गाउँको सभ्यता, संस्कृति, उत्पादन नै मेटिने अवस्था आएको छ । हामीले हाम्रो इतिहास जोगाउन सकेनौं भने हाम्रो अस्तित्व के हुन्छ । त्यसैले पनि मौलिकतासहितको ग्रामीण पर्यटनको विकास हुन आवश्यक छ । अहिलेसम्म हामीले पर्यटन भनेकै ठूला ठूला संचरना, हिमाल र तालतलैया भन्नेमात्रै बुझ्यौं ।
हाम्रा योजना पनि त्यसैमा केन्द्रित भए । तर, गाउँमा तीबाहेक मानव सम्भ्यता, संस्कृति, कसरी समाज विकसित हुँदै आयो भन्ने मियो कुराहरु छन् । तीनलाई उजागर गर्नतिर कसैको ध्यान गएको छैन । अब ग्रामीण पर्यटनको योजना ल्याउँदा यी कुरालाई पनि ध्यानमा राख्न आवश्यक छ ।
विशेष सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ
हाम्रो अहिलेको माग भनेको ग्रामीण पर्यटनको नारा दिएर मात्रै हुँदैन । त्यहाँसम्म पुग्ने मार्ग निर्माण र जाने मान्छेलाई आकर्षक योजना सरकारले ल्याउनुपर्छ । नत्र त्यसै कोही जाँदैनन् । त्यहाँ जाने मान्छेलाई उपलब्धमुलक हुने खालेको योजना बन्नुपर्छ ।
अहिले हाम्रा लागि आन्तरिक पर्यटक भनेका सरकारी कर्मचारी, व्यवसायी र विभिन्न क्षेत्रमा रुचि भएका अनुसन्धानकर्ताहरु नै हुन् । उनीहरुका लागि सहुलियपूर्ण योजना सरकारले अघि सार्नुपर्छ । केही छुट र बिदा दिने गर्नुपर्छ । जसमा उनीहरुले भरपुर सदुपयोग गरी ग्रामीण क्षेत्रलाई बुझ्ने प्रयास गरुन् ।
घुम्ने जाने भनेकै माथिल्लो निकायका मानिसहरु नै हुन् । यदी हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटनलाई केन्द्रित गर्यौैं भने, त्यहाँको चहलपहल मात्रै बढ्दैन । उनीहरुले गाउँको महत्व पनि बुझ्नेछन् । साथै गाउँलेले कसरी जीवन बिताइरहेका छन् भन्ने अनभूति पनि गर्छन् । निर्णायक तहमा माथिल्लो वर्ग नै हुने भएकाले आगामी योजना निर्माणमा ग्रामीण क्षेत्रको ऐतिहासिक महत्वको रक्षा गर्दै विकास कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ ।
अव्यवस्थित विकास चुनौती
दुई वर्षता स्थानीय तहमा सरकार गठन भएपछि विकासको लहर नै चलेको छ । तर, विकासका नाममा विनास भइरहेको उनीहरुलाई नै भान छैन । हामी पर्यटनको कुरा गर्दैगर्दा गाउँका ऐतिहासिक धरोहर मासिरहेका छन् । त्यहाँका सुन्दर चुचुरा खनेर सबै पहिरोमा परिणत भएका छन् ।
यसमा स्थानीय सरकारसँग संघीय सरकारले समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार मात्रै विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने नीति बनाउनुपर्दछ । नत्र भोली हामीले फलानो ठाउँ थियो रे भन्ने दिन नआउला भन्न पनि सकिँदैन ।
जनतालाई पनि विकास भनेकै बाटो निर्माण भन्ने लागेको छ । बाटो बनाउनु त पर्छ नै । तर स्थानीयको आम्दानीसँग जोडिएका कुराहरु अरु पनि छन् । तीनमा जनप्रतिनिधिको ध्यान जानसकेको छ । न कर्मचारीकै । उनीहरु कसरी हुन्छ, छिटो काम सकेर रकम सिध्याउने ध्याउन्नमै छन् ।
हामीले स्थानीय सरकारलाई पनि आवश्यकताका आधारमा मात्रै यस्ता संरचना निर्माण गर्न आग्रह गरेका छौं । विकास गर्ने भन्दै पुरातात्विक महत्वका धरोहर हरु नासिने काम नगर्न सुझाएका छौं । नत्र भोली हामीले बाटोघाटो देखाएर त पर्यटन प्रवद्र्धन हुँदैन ।
स्थानीय तहले पनि पर्यटन विकासका लागि भन्दै धेरै बजेट छुट्याएका छन् । त्यो बजेट सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । एउटा मन्दिर वा एउटा कुनै धारो निर्माण होइन कि भोली त्यसले प्रत्यक्ष रुपमा स्थानीयलाई लाभ हुने ठाउँमा खर्चिनुपर्दछ ।
संघीयस सरकारले नै मापदण्ड बनाएर पर्यटनका नाममा विनियोजित बजेट कहाँ खर्च गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाउनुपर्दछ । बरु धेरै पालिकाहरु मिलेर एक कुनै ठाउँलाई विशेष क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । कनिका छरेझै बजेट छर्नुभन्दा एकीकृत गर्नसक्यो भने हामीले सोँचेको ग्रामीण पर्यटनको परिकल्पना पूरा हुनसक्छ । अहिलेको स्थितिमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्ने एकमात्र विकल्प भनेकै ग्रामीण पर्यटन नै हो । यसका लागि सबै व्यवसायी, सरकार र यससँग सम्बन्धित सरोकारवालाले विशेष प्याकेजसहित लकडाउनपछि ग्रामीण क्षेत्रमा पस्ने योजना बनाउनुपर्छ ।